China XY-1510G varahina fahagola nopetahany takelaka famokarana tariby sy orinasa | Shuolong
XY-1510G varahina vita amin'ny varahina tranainy
XY-1510G- harato metaly dia tafiditra ao anaty fanaka, ary ny fitambaran'ilay harato varahina fahagola sy ny vatan-kazo dia mahatonga ny endriny ankapobeny ho an'ny fanaka ho lafo vidy kokoa.
Diameter fisaka: 1,5 × 3.5mm
Pitch fisaka: 10mm
Lanja: 8.6kgs / m2
Hate matevina: 3mm
Surfreur surface: nopetahana ny fahagola
Max Halavany: 3.0m
Metal harato azo ampiasaina amin'ny haingon-trano fanaka, ary ny ankamaroan'ny varahina vy varahina fahagola dia ampiasaina ho varavarana kabinetra. Ny tontonana vy vita amin'ny vy tsy matevina dia ampiasaina kokoa amin'ny fitoeran-kitapo kiraro amin'ny toeram-pivarotana lehibe. Miaraka amin'ny hazavan'ny jiro dia manatsara kokoa ny haavon'ny entana sy ny fomban'ny fivarotana amin'ny ankapobeny.
Inona koa, raha mila mampiditra singa famolavolana vy amin'ny tetik'asa misy anao na ho avy ianao dia mifandraisa anay azafady. Ho fanampin'ny vokatra avo lenta sy ny vidiny tsara indrindra, azonay atao ihany koa ny manome serivisy namboarina sy vahaolana fametrahana ho an'ny Programanao.
1.40 taona niainana : Maherin'ny 40 taona ny famokarana harato tariby.
3.Installation sy kojakoja: Afaka nanome vahaolana sy kojakoja ilaina harato ho anao izahay
Previous: XY-1513 Skrin-tenona voaravaka mari-trano
Manaraka: XY-3833 Building Facade Mesh
Wall Wire harato
Wire harato lamba
Mpamatsy harato tenona
XY-3150G Antique Brass Mesh lamba ho an'ny divay Cab ...
XY- C1 Varahina vy varahina fahagola ho an'ny fanaka
XY-2027 lamba vy vy harato ho an'ny lako ...
XY-2414P Stainless vy fisaka tariby tenona harato s ...
XY-C1B Black Mebel Metal Mesh Insert